Unodoli oMncinci weSondo- uMncinci kunye noMdluli weSini woLutsha oThengiswayo-ii-Urdolls
Wamkelekile kwiVenkile yeDoll Sex
Unodoli omncinci wesini esiwuthengisayo uyafana namantombazana. Oonodoli abakwixabiso eliphezulu abakwixabiso eliphezulu abanamabele amakhulu, amabele amancinci, amakhulu & neempundu ezincinci. Unokunciphisa uxinzelelo lwakho lwemihla ngemihla kwaye ikunike ubomi obulungileyo bokwabelana ngesondo. Khawuleza wenze iodolo yokuthenga. Sinikezela ngenkonzo yohambiso lwasimahla kunye nenkonzo yonikezelo oluyimfihlo ukulungiselela unodoli wesini omncinci uyathenga.
I-Dayana etyebileyo iimpundu ezigcweleyo ziqinile ngokwesondo unodoli we-C-Cup Isifuba esincinci TPE 148CM Umdaka okhanyayo 100% ubomi bokwenyani ukuzala Ubuso bembewu ye-melon
I-Clementine engathintelwanga njengoBomi njengoNodoli omdaka ngesikhumba se-TPE 165CM Isifuba esiqhelekileyo
I-Karsyn Fat buttocks i-Real Sex Doll C-Cup Amabele amancinci TPE 158CM Amava ngokwenyani ngokwesondo
Ukuveliswa kwe-Emmie ye-Sex yenyani unodoli we-C-Cup omnyama ophindwe kabini weponytail TPE 158CM Isifuba esincinci esidlalayo
UJulie Ubomi bokwenyani ireplica mzuzu wesondo unodoli wezihlunu imodeli TPE 150CM Amabele amakhulu Imilebe epinki
UJulieta isitayile saseAsia iTpe isini unodoli D-Cup Umfazi omncinci oSexy TPE 158CM Isifuba esiqhelekileyo Imilenze ebhityileyo
Iinkcukacha zoMzimba ka-Briana we-Tpe uDoli we-Sex we-C-Cup Isifuba esincinci se-TPE 158CM ilokhwe yomdanisi oyi-Sexy stewardess
IJane-H yeNdebe ye-163CM yoThando lwaBantu abadala i-WM Dolls
Yintoni oonodoli abancinci besini?
Oonodoli abancinci besini bakhangeleka njengabafundi abancinci abaphakathi kweminyaka eyi-13 ne-19, kwaye unokubabiza ngoonodoli abancinci besini okanye Oonodoli baseJapan. Oonodoli bethu abancinci bothando bahle, banomtsalane, baselula, bakhaphukhaphu, banombala wolusu ococekileyo, nto leyo emenza into oyithandayo yesondo. Oonodoli abancinci bezesondo ziya zithandwa ngakumbi ngobuhle bazo obukhethekileyo. Ngemvume yenzululwazi, umsebenzi omhle wenza ukuba oonodoli abancinci bothando bathandeke ngakumbi nangakumbi.Sineendlela ezininzi zoonodoli abancinci bothando: unokukhetha unodoli wentombazana wesikolo onamabele amancinci, oonodoli abancinci abajongeka beselula abanamabhobho amakhulu, oonodoli bothando ngeengono ezintle nezidlamkileyo. Kwaye unokwenza ngokwezifiso umbala wengono, umbala wolusu…
Umthamo wedoli yesini esincinci kunye nezinto eziphathekayo
Unodoli wethu omncinci wesondo wenziwa nge-silicone okanye ngezinto ze-TPE. unodoli omncinci wesondo unobungakanani obuncinci, ukhaphukhaphu, ixabiso eliphantsi lokuthengisa, kwaye kulula ukuhamba, oku kuthetha ukuba bayakwazi naziphi na izikhundla zesini ozifunayo. Oonodoli abancinci bezesondo kulula ukuzigcina.Ezi Anodoli yesini banobuso obuncinane obumsulwa, namehlo anomtsalane. Ngobukhulu obuncinci kunye nomzimba we-sexy curvy, banika amadoda ulonwabo olukhulu.
Amadoda amaninzi aneengcamango malunga nonodoli wesondo oselula. Oonodoli abakwishumi elivisayo ngoonodoli besondo abamangalisayo benzelwe ukuzalisekisa iminqweno yakho yesini. umfanekiso ogqibeleleyo, ngakumbi oonodoli bothando bomntwana wesikolo. Bakwixesha lokukhula nje xa besoyika isini kwaye kwangaxeshanye bezele yiminqweno yesini. Basengamantshontsho amancinci belindele indoda ukuba ibavule.Umnqweno uya kukhululwa kwaye ubomi buya kuba mnandi ngakumbi. Gcina impilo yengqondo - Ukwabelana ngesondo kubalulekile ekugcineni impilo yengqondo.